C/casiis Lafta-gareen oo soo saaray Liiska Musharixiinta Aqalka Sare (Akhriso Magacyada 10 Musharax) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa soo saaray Liiska 10 ka mida Musharaxiinta u tartameysa 5 ka mida Kuraasta Aqalka sare ee laga soo doorto K/Galbeed.
Musharaxiinta 10-ka ah waxay u tartamayaan Shan kursi oo ka mida 8 Kursi ee Aqalka Sare ah, waxaana laa kursi oo ka mida loo xiray oo ku tartamaya oo kaliya haween, taasoo ay si weyn u dooneysay Beesha Caalamka.
Musharixiinta Aqalka Sare ee Madaxweynaha K/Galbeed soo sharxay waxaa ka mida Wasiir Kuxigeenka Arrimaha Gudaha Aadan Cabdinaasir iyo xubno aad ugu dhow, kamana dhex muuqdaan siyaasiyiin caan ah oo la yaqaan.
Madaxweynaha K/Galbeed ayaa isbaheysi gaara la leh Madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo, waxaana la sheegay inuu meesha ka saari doono musharixiinta la yaqaan ee siyaasiyiinta hore ah.
liiska xildhibaanada Aqalka Sare
Previous articleAlshabaab Maxay uga gaabsatay inay sheegato Qarxintii Baska Ciyaartoyda ee Magaalada Kismaayo..?
Next articleLafta-gareen oo Musharaxnimada Aqalka Sare ka reebay Saddex Siyaasi oo mucaarad ahaa (Akhriso)